हिन्दु धर्म किन त ? के विज्ञानसम्मत छ त हिन्दु धर्म ? – Hindu Cultural Center
Home Event Calendar हिन्दु धर्म किन त ? के विज्ञानसम्मत छ त हिन्दु धर्म ?
विश्वको सबैभन्दा पुरानो धर्म तथा सँस्कार भनेकै हिन्दु धर्म हो ।
हिन्दू धर्मलाई अन्धविश्वास, ढोँगी, पाखण्ड, सैतान भन्नेहरूलाई 17 प्रश्न कृपया कमेन्टमा उत्तर लेख्नुहोला –
१> नासाका वैज्ञानीकहरुका अनुसार सुर्यबाट ॐ को आवाज आउँछ कसरी?
२> किन अमेरिकाले हिन्दूहरूको पवित्र गौमुत्रको patent अधिकार लिएर क्यान्सर जस्ता रोगको अौषधि बनाइरहेको छ ? जबकि हामीलाई गौमुत्रको महत्व हजार साल पहिलेबाट थाहा थियो !
३> किन अमेरिकाको सेटन बिश्वबिद्यालयमा गीता पढाई भइरहेको छ? किन अमेरिकाको राष्ट्रिय चरो नै गरुड़ (Eagle)?
४> किन इस्लामिक देश इंडोनेशिया को बिमानको नाम भगवान नारायणको वाहन गरुडको नाममा garuda indonesia र त्यसमा गरूणको symbol पनि छ?
५> किन इंडोनेशिया पैसामा भगवान गणेशको फोटो छ?
६> किन बाराक ओबामा आफ्नो खल्तीमा हनुमानजीको फोटो राख्छन् ?
७> किन आज सारा दुनिया योग-प्राणायामको पछि लागेका छन?
८> कसरी हिन्दु वैज्ञानिकहरू हजार साल पहिले बताउन सफल भए कि धर्ती गोलो छ?
९>किन जर्मनीको aeroplane को नाम संस्कृत नाम Lufthansa छ?
१०> किन हिन्दुको नाममा अफगानिस्थानको पर्वतको नाम हिन्दुकुश राखिएको छ?
११> भियतनाममा बिष्णु भगवानको 4000 साल
पुरानो मूर्ति पाईयो कसरी ?
१२> किन अमेरिकी वैज्ञानिक haward को शोध
पछि मानियो कि गायत्री मंत्रमा 110000 freq को कंपन छ?
१३> यदि हिन्दु धर्ममा यज्ञ गर्नु अंधविश्वास हो भने
साइन्समा सोध्नोस् गोबरमा घ्यू जलाउनाले १० लाख टन अक्सीजन बन्छ बाताबरण स्वच्छ हुन्छ ?
१४> किन julia roberts (American actress and producer) ले हिन्दु धर्म अपनाइन?
१५> यदि रामायण झुटो हो भने कसरी दुनियाभरमा केवल रामसेतूको पत्थर आज पनि तैरि रहन्छ ?
१६> यदि महाभारत झूठो हो भने कसरी भीम पुत्र
”घटोत्कच”को विशालकाय कंकाल 2007
मा नेशनलजिओग्राफीक टीमले उत्तरभारतमा भेट्यो?
१७ ‌> कसरी अमेरिकी सैनिकलाई अफगानिस्तान (कान्दाहार) को एउटा गुफामा 5000 साल
पहिलाको महाभारतको समयको “विमान”मिल्यो?
यो सबै सत्यतामा आधारित कुरा हो।
हामी झुटो र लालची गर्न जान्दैनौ |
साइन्स हिन्दु धर्मबाट सुरु भएको हो
Proud to be hindu # ॐ
पैसाको लागि आफ्नो धर्म/ सँस्कार परिवर्तन गर्नु महापाप हो । अरु पनि हाम्रो धर्मसम्बन्धी थप जानकारीको लागि यस वेबसाईटमा गई सब्सक्राइब गर्नुहोस् www.hinduculturecenter.com